Fox News tsanangudzo: Zvikamu zvishanu pamagumo ekutsvaga mu Mueller pamusoro peRussia - TELES RELAY
HOME » kambani Fox News tsanangudzo: Zvikamu zvishanu zvakagadziriswa pamushure pemubvunzurudzo weMueller pamusoro peRussia
Fox News tsanangudzo: Zvikamu zvishanu zvakagadziriswa pamushure pemubvunzurudzo weMueller pamusoro peRussia
Heano nharo shanu dzinofanira kuyeuka pamusoro pekuongorora kuRussia munhu Fox News Poll yakabudiswa China.
- VaRepublicans vanotendeukira kumudzidzisi chaiye Robert Mueller
- Mueller anovimbwa kupfuura Mutungamiri uye Attorney General
- Vavhoti vanotenda kuti zvinobvira kuti FBI iparadze mutemo painoongorora tsongedzo yeTump.
- Zvimwe zvinopesana nekudzingwa kwe Mutungamiri Trump pane kuti vatsigire.
- Vatsvaki havatende kuti Bharrister Barr anyore mushumo we Mueller uye asingavimbi nezvinangwa zvake.
Heino nhamba dziri shure kwezviwanikwa izvi:
Vane makumi matanhatu nevatanhatu vevhoti vanobvuma nzira iyo Mueller akaita nayo kuongorora muRussia, apo 32% isingadi.
Makumi makumi matatu navasere vezana veRipublicans vanobatana ne55% yeDemocrates kuti vabvumire Mueller - uye mbiri idzi idzi dzinomiririra zvakakosha. Kubvumirwa kwawedzera pakati peRepublicans uye pakati peDemocrates kubvira pakupedzwa kwekutsvakurudza kwake, izvo zvakakundikana kuwana uchapupu hwemhosva pakati pevamiriri veTrump neRussia uye zvakaguma musina mhosva yekuvhara ruramisiro kumutungamiriri wenyika.
Pakati Republicans, Mukanova yepasi divi basa kwakavandudza 41 kubva muzana pfungwa dzisina kunaka 43 (anotenderwa 23, 66 deprecated) kuti kunaka muna March 2 nhasi (38-40%).
Pakati Democrats, tendero Mukanova hwaipa 43 pfungwa 73 + (82-9%) zvichienzaniswa pamberi 30 + (55-25%) iri sarudzo itsva.
Paakabvunzwa vavakagadza vanovimba zvakawanda muchokwadi, vavhoti sarudza Mukanova pachinzvimbo Trump (pakati 45 uye 27%), Mukanova pamusoro Attorney General William Barr (pamusoro 40 kuti 22%) uye Congress of Democrats Kutarisirwa (pamusoro 44 kuti 33%).
Vavhoti ipai Barr kunaka kutsoropodzwa nokuda kwayo Mabatirwo Mukanova mushumo (35 dzinobvumira, ramba 44), uye ukomba hwakanga huchiipoteredza 12 pfungwa äiti Tinofunga "anovanza zvakawanda" purezidhendi anoda kubvisa Vanhu veAmerica (45 kusvika ku33%).
Bharr akati akanga achitarisa kuona kana mushandirapamwe weTrumb spying wokutanga wakagadzwa pamutemo uye wakapiwa United States. Connecticut District Attorney John H. Durham, kuti aongorore mitsva yekuongorora kuRussia.
FUNGA PENYU KUVERENGA ZVINHU ZVINOKUDZIDZA
A ruzhinji (58%) kufunga zviri kanenge Zviri zvimwe kuti FBI akatyora mutemo paakatanga kuongorora Trump Campaign: 24% wavo vachiti "zvikuru" zvichida, 14% "Zvikuru" zvichida uye 20% "pane" zvichida. The Republicans (77%) vari 35% kazhinji pane Democrats (42%) kutenda pane kanenge mukana kuti basa zvisiri pamutemo kuitika.
Muchiitiko chekuongorora, 32% inotsigira basa raJames Comey semutungamiri weFBI, apo 40% isingabvumirwi. Imwe 27% haina chokwadi.
Vatsvaki vanopikisa kubviswa kweTump uye kuparadzwa: 42% yevanhu vakapindura, 50% kwete. Vanomwe kubva kune gumi vane madhimocrats vanoda kuti iye aiswe, kurwisa mumwechete muRepublicans. Aya mafananidzo haana kuchinja kubva munaJanuary
Zvichakadai, vavhoti vangangoramba kudavira kuti Democrats muna Congress kutsvaka chokwadi kuti American vanhu (49%) pane kurwisa zvisiri Trump (41%).
Pakati pevhoti avo vane ruzivo rwakanyanya kana ruzivo pamusoro pehupfumi rweMueller, maonero anowanzova akawanda pamusoro pekutonga. Mashanu nezvina kubva muzana vakaita vavhoti vanoti Congressional Democrats vari kutsvaka chokwadi, 53% vanofunga Barr anofukidza Trump uye maonero enyika kudzingwa iri pekupedzisira pakati 49 uye 49%. 60% inobvumira Mueller
Asi kupindira kweRussia mukusarudzwa hakusi izvo vazhinji veAmerica vanopedza nguva yavo vachifunga nezvazvo. Mukukurukurirana neshamwari uye vavakidzani, pamusoro pe4 pamusoro pe10 vanowanzotaura pamusoro pemari yehutano (40%) uye kutamira kune dzimwe nyika zvisina kutenderwa (37%). Izvi zvinenge kaviri nhamba yevanhu vanowanzotaura nezvekupindira kweRussia mumasarudzo (21%).
Chakaitwa 11 kuna 14 May 2019 pasi vagari achitungamirirwa Beacon Research (D) uye Shaw & Company (R), kuti Fox News kuongorora zvinosanganisira kubvunzurudza 1 008 vakanyorwa vavhoti randomly kusarudzwa munyika, uyo akataura Live interviewers pamusoro wakaiswa uye maserura. The ongororo ine zvakabudiswa kukanganisa kumucheto kuti ndinoiitawo kana kubvisa zvitatu kubva muzana pfungwa vose vakanyorwa vavhoti.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.foxnews.com/politics/fox-news-poll-five-takeaways-on-the-russia-investigation-post-mueller-report
Bhizimisi Kurarama: Ingo Eat share share
Mutumbi wechidiki cheWest Virginia, makore e-15, akawanikwa munzvimbo ine makomo; mukomana waamai vake vakasungwa